That's so good, right?: Lovingaperson Who Loves Him
ရောင်နီဦးကိုမြင်ရဖို့ အတော်ရှည်ကြာခဲ့သည့်ည။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ညတစ်ည။ 'အကောင်းဆုံးည' ဖြစ်ဖွယ် ယူဆရသည့်ညလို့ ကျွန်တော်တွေးနေမိပြီး မျက်ခွံတွေကို အားယူဖွင့်ခဲ့ရပါတယ်။
မောပန်းနွမ်းလျစွာနိုးထခဲ့ရတဲ့ မနက်ခင်းတစ်ခုပေါ့ ဒီမနက်ဟာ။ တွေ့ကြုံဖူးခဲ့တဲ့ညများစွာထဲမှာ သော်ဇင်နှင့်အတူ ရင်ခုန်လှိုက်မောစွာဖြတ်ကျော်ခဲ့ရသည်မို့ အခုသူ့ခမျာ တစ်ယောက်အိပ်မွေ့ယာလေးမှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်စက် နေပါရဲ့ ကျွန်တော့်ဘေးမှာ တစ်ညလုံးပေါ့ အခုထိ။ ကျဉ်းကျဉ်းကြပ်ကြပ်အခြေအနေမှာ သက်သောင့်သက်သာ အိပ် စက်ရခြင်းမဟုတ်ပေမဲ့ ကျွန်တော်ကျေနပ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့လက်တွေခြေတွေ ယှက်နွယ်လျက်၊အ၀တ်မပါသော ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုဟာလည်း ထိကပ်လျက်ပါ။ သော်ဇင့်မျက်နှာလေးဟာ ကျွန်တော့်ဘက်ကိုမျက်နှာမူလျက် အေးအေး သက်သာနှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်နေတာများ ကလေးနှင့်ပင်တူပါသေးရဲ့။ ကြည့်ရင်းနဲ့ အသည်းယားလာတာကြောင့် လက်မောင်းလေးကိုနမ်းလိုက်တော့ စွဲမက်ဖွယ် ကိုယ်နံ့လေးက တိမ်းမူးစေပါတယ်။ အိပ်ရေးသိပ်မ၀ခြင်းကြောင့်ရော အနည်းငယ်မောလျနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို အားအင်ပြန်လည်ပြည့်စေသလားပဲ။
ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူက ဘယ်မှာမှမရှိနေဘူး။ မျက်စိရှေ့မှောက်မှာပဲ အိပ်စက်နေတာ။ ဘယ်တစ်ယောက်ကိုမှ ရင်ထဲအသည်းထဲက မချစ်ခဲ့ဖူးဘူး သူသာအချစ်ဦး။ လက်မောင်းလေးကို အသာအယာလှုပ်ပြီး နှိုးပေမဲ့ နှစ်နှစ်ခြိုက် ခြိုက်နဲ့အိပ်ရင်းကနေ လှုပ်ရုံလေးလှုပ်ကာ တစ်ဖက်ကိုစောင်းသွားပါရဲ့။ ပြုံးပင်ပြုံးမိရပေါ့။ ကောင်းပါတယ် နာကျင် မှုမရှိ၊ ကြောက်လန့်နေရမှုမရှိ အပြစ်ကင်းစွာအိပ်စက်ရတာများ။ သော်ဇင်ဟာ မပူမပင် မကြောင့်မကျနေခဲ့ရတဲ့ ကောင်လေးပါ။ နေဖြစ်ကြတာလည်း တစ်ရပ်ကွက်ထဲဆိုတော့ သူ့မိဘတွေရဲ့ ချမ်းသာမှု၊ ချစ်ခင်အလိုလိုက်မှုတွေကို ခံရသူ၊ အားလုံးရဲ့ဦးစားပေးလေးပေါ့။ ကျွန်တော့်မိဘများနှင့် စီးပွားဖက်တွေဆိုတော့ အားလုံးသိနေရတာ။ သူနှင့် ကျွန်တော် ' Love at first sight' ဖြစ်ခဲ့ရတာပြောပြရင် ယုံကြမလားမသိဘူး။
အထက်တန်းကျောင်းမှာတုန်းက ပတ်သက်ဖူးသူတစ်ချို့လို လိင်ကိစ္စပြီးတာနှင့် 'သွား' ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးမဖြစ်ပေါ်ဖူးဘူး သူနဲ့ဆိုရင်။ အခုတက္ကသိုလ် ဘွဲလွန်လာတက်တော့ ဘာသာရပ်ခြင်းအတူတူယူဖြစ်တာကြောင့် အခန်းအတူတူငှား ဖြစ်ကြဖို့ စီစဉ်ပေးတဲ့နေ့မှာ မျက်ဝန်းခြင်းဆုံရင်ခုန်ခဲ့ကြတာ။ ကျွန်တော်ယုံတောင်မယုံချင်ပါဘူး တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ လက်မောင်းတွေထဲ နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်စက်ရခြင်းဟာ ဒီလောက်အံ့သြဖွယ်နွေးထွေးလုံခြုံစေတယ်ဆိုတာ။ ဒီနေ့ သော်ဇင့် မိဘတွေ ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတွေ့ဆုံကြမှာလေ။ အဲဒါသူတို့တည်းခိုမယ့်ဟိုတယ်မှာ သွားတွေ့ရမှာ နောက်ကျနေပြီ ထင်ရဲ့။ ကျွန်တော့်ခုတင်ဘေးက နာရီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ချိန်းထားတဲ့အချိန်နဲ့ နှစ်နာရီလောက်ပဲလိုတော့တာ။ သော်ဇင့် အနားတိုးကပ်လိုက်ရင်း သူ့နှုတ်ခမ်းအစုံကို စုပ်ယူနမ်းရှိုက်ကာနှိုးလိုက်ရပါတယ်။
'Good morning, သော်ဇင်'
သော်ဇင်နိုးတော့ နိုးပါရဲ့ အိပ်ချင်နေသေးဟန်ဖြင့် ကျွန်တော့်နားတိုးကပ်ရင်းမှိန်းနေသေးတယ်။ သူဟာ မနက်ခင်း နေရောင်ကို မြင်ချင်သူတစ်ဦးမဟုတ်ဘူးပဲ။ ဘယ်ရမလဲ....သူ့ခါးကနေပွေ့ထူကာ ရေချိုးခန်းဆီခေါ်သွားလိုက်တာ ပေါ့။ သူအိမ်သာကြွေကမုတ်မှာထိုင်နေတုန်း သူ့လည်တိုင်လေးတွေနမ်းရတာ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ကလိရတာ အနံ့ပြင်းတွေရနေတာတောင် သတိမပြုမိပါဘူး။ သော်ဇင့်လက်တွေကလည်း ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေကို ဖျစ်ညစ်ရင်း ချယ်ရီပေါက်ကို ကလိဖို့ကြိုးစားသေးတာ။ အား....ကြက်သီးတောင်ထမိတယ်။
သူကနေရာတွေ အချိန်တွေသိပ်ရွေးချင်တာ မဟုတ်ဘူး စိတ်ခံစားမှုရှိတဲ့အတိုင်းမျောချင်တဲ့ကောင်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ ကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်။ သူလည်းပဲ ကျွန်တော့်ကိုချစ်တယ်။ သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် ဒါမှမဟုတ် စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုခုလို့မပြောနဲ့ သူနဲ့သက်ဆိုင်သမျှအားလုံး ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ရယူချင်တာ။ အခန်းထဲမှာ ဘယ်သူမှမရှိရင် နှစ်ဦးသား တင်းကြပ်စွာ ဖက်ရင်း လက်တွေဟာ နေရာအနှံ့။
'အ....မင်းနှုတ်ခမ်ဒမွှေးတွေနည်းနည်းရှည်နေပြီ၊ ရိတ်လိုက်ပါဦးကွာ စူးတယ်'
သွားပွတ်တံမှာ သွားတိုက်ဆေးညှစ်ထည့်နေတုန်း သူလာပြီးပါးကိုနမ်းတာလေ။ စတိုင်လ်...စတိုင်လ်ဆိုပြီး မရိတ်ဘဲ ထားတဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေက စူးတာကိုး။
'ကိုသူရိန်ပြောသလို ငါတို့ တုံးလုံးရှိုးသူတို့ရှေ့လုပ်ပြရအောင် ဘယ်လိုလဲ?'
'ကြံကြံဖန်ဖန်...မင်းဖာသာအရှက်မရှိလုပ်...ငါတော့မလုပ်ဘူး၊ ဟေ့...ရေပူတွေသိပ်မဖွင့်နဲ့ ရာသီဥတုက သိပ်အေး တာလဲမဟုတ်'
အဲဒီကောင်ဟာလေ စိတ်ထဲက ပါတာလည်းမဟုတ် လျှောက်ပြောနေတာ။ လက်တွေ့ကျတော့ သူ့လောက် သ၀န် တိုတတ်တဲ့သူကိုမရှိဘူး။ ဖွင့်ထားတဲ့ ရေပန်းအောက် အသာဝင်ရပ်ရင်း ပခုံးကိုလှမ်းကိုင်မိစဉ်ခဏ မျက်ဝန်းတွေက ရီဝေေ၀နှင့်။ လက်ထဲ ဆပ်ပြာခရင်မ်တွေ အများအပြားထည့်ရင်း ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို သူငြင်ငြင်သာသာပွတ် သပ်ပေးတာ ညက အရှိန်မသေသေးတဲ့ ပေါင်ကြားက ညီဘွားက ငုတ်တုတ်။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ပေါင်တံတွေ ရင် အုပ်တွေကိုပွတ်သပ်မိရရင်း တင်ပါးဖြိုးအိအိကို ဖျစ်ညှစ်လိုက်တာ အချိန်တွေကို မေ့ထားချင်သလိုပါပဲ။
'တစ်နာရီနဲ့ မိနစ် ၂၀'
ရေတွေနဲ့ ဆပ်ပြာကို စင်အောင်ဆေးပြီးနောက် သော်ဇင့်နှုတ်ခမ်းအစုံဟာ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းဖျားကနေ ရင်အုပ်-နို့သီး ခေါင်းလေး-ဆီးခုံက အမွှေးတွေ...အိုး...ပူနွေးနေတဲ့ အာခံတွင်းထဲ ကျွန်တော့်ညီဘွားကို စုပ်ယူလိုက်တာ နွေးကနဲပဲ။ သူ့လက်အစုံဟာလည်း ရွှေဥတွေကို အသာပွတ်သပ်နှိပ်နယ်နေတော့တာ။ သူလွတ်လွတ်လုပ်လပ် လုပ်လို့ရအောင် ပေါင်ကို ကားပေးလိုက်ချိန်မှာတော့ သူ့လက်တစ်ဖက်ဟာ ကျွန်တော့်တင်ပါးများဆီရွေ့လျားသွားရင်း ချယ်ရီပေါက်ကို အသာကလိတယ်လေ။ လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ချယ်ရီပေါက်ထဲ ကလိနေရင်း ပါးစပ်ကလည်း Lollipop ကို စုပ်မျို သလို လုပ်နေတော့ ရင်ထဲ ဖီးလ်နှစ်မျိုးခံစားရသလိုဖြစ်ကာ အထွဋ်အထိပ်ဖြစ်ချင်လာရတယ်။ သူ့အာခံတွင်းထဲ အဆုံး ထည့်ပြီး ငြိမ်နေမိစဉ်ခဏ သူ့ပခုံးကို မထူပြီး မတ်တပ်ရပ်စေလိုက်တာ။ တော်ကြာ အမြန်ပြီးဆုံးသွားမှာလေ။ သူ့အ လှည့်ဆိုတာလေးလည်း ပေးပြီး ပြုစုပေးရတာပေါ့။
နူးညံ့ပြီးမွှေးနေတဲ့ သူ့လည်တိုင်လေးကို အသာနမ်း၊ အမွှေးနုလေးတွေပေါက်နေတဲ့ ရင်ဘတ်က နို့သီးခေါင်းလေးကို နှာခေါင်းနှင့် အသာထိခတ်ကာ သီးမွှေးငှက်ပျောသီးလို ရှည်လျားလှပတဲ့ သူ့ငပဲကို အသာကိုင်ရင်း လျှာနဲ့တို့ကြည့်မိ တယ် အရင်ဆုံး။ ဒီအချိန်ခေါင်းပေါ်ကစီးဆင်းလာတဲ့ ရေတွေဟာ သူ့ဘယ်လီကြွက်သားကတစ်ဆင့် ကျွန်တော့်ပါးစပ် ထဲဝင်လာပေမဲ့ ထွေးမပစ်ရက်ပါ။ ခပ်ဟဟဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာအတွင်း ဖြည်းဖြည်း လေးသူ့ငပဲ ကိုအဆုံးထိထိုးသွင်းရင်း ရှေ့တိုးနှောက်ငှင်သူလှုပ်ရှားပါတော့တယ်။ ခဏနေတော့ အသာပြန်ဆွဲထုတ် ရင်းအသာ ငြိမ်နေကာ ကျွန်တော့်ကိုမတ်တပ်ရပ်စေလျက် နှုတ်ခမ်းများကို နမ်းစုပ်ကာ တင်းကျပ်စွာဖက်တွယ်ပါတော့ တယ် လက်မောင်းအစုံဖြင့်ပေါ့။ သူလည်းပဲပြီးဆုံးဖို့ မဖြစ်ချင်သေးဘူးထင်ပါရဲ့။
'I want you to go up my ass'
သူဘာလိုချင်နေသလဲ ကိုယ်ဘာလိုချင်နေသလဲဆိုတာ အံကိုက်ကိုဖြစ်နေတာ။ရေပန်းခလုပ်ကို အသာပိတ်လိုက်ကာ နှစ်ဦးသားနှုတ်ခမ်းခြင်းသော့ခတ်နေမိကြတာ မိနစ်အနည်းငယ်တော့ကြာတယ်။ ဖက်တွယ်ထားတဲ့ သူ့လက်မောင်း တွေကို လွှတ်လိုက်ကာ bath tub ရဲ့နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ကိုင်လျက် သူ့တင်ပါးတွေကို ပင့်မြှောက်ရင်း ခပ်ကုန်း ကုန်းလုပ်ပေးတယ်။ ရင်ထဲသွေးခုန်နှုန်းမြန်လာသလိုဖြစ်ရကာ ကျွန်တော်လည်း သူ့ကျောပြင်တစ်လျှောက် အနမ်း ပေးရင်း တင်ပါးအကွဲကြောင်းလေးထဲ လျှာကို အပြားလိုက်ကပ်ရင်း ကလိပေးတာပေါ့ အမြန်။ တံတွေးတွေနှင့် စိုစွတ် နေမှ သွင်းတဲ့အခါ သူမနာရမှာ။
သူ့ခါးကလေးကော့ကော့သွားရတဲ့အထိ လျှာကျွေြး့ပီးနောက် ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ညီဘွားကို တွင်းအောင်း ဖို့မတ်တပ်ရပ်လိုက်တယ်။ တံတွေးနည်းနည်းထပ်ထည့်လိုက်ပြီး ကွမ်းသီးခေါင်းလေးကို အသာ အရင်ဆုံးထိုးထည့် လိုက်တာပေါ့။ သူ့အပေါက်က တော်တော်ကျပ်တာ။ အနည်းငယ်ပြန်ထုတ်လိုက် နှဲ့ပြီးဖိသွင်းလိုက်နဲ့ အိနေတဲ့တင်ပါး တွေ ကျွန်တော့်ရွှေဥနှင့် ထိကပ်မိမှ အသာငြိမ်လိုက်တာပေါ့။ ပါးစပ်ကညည်းတွားသံသဲ့သဲ့ထွက်လာပေမဲ့ မရုန်းဖယ် တာကြောင့် ကျွန်တော်အထုတ်အသွင်းခပ်မှန်မှန်လေး စလုပ်ဖြစ်တယ်။
အိမ်ထောင်ကျခါစ စုံတွဲတွေရဲ့ နေ့ရက်တွေလို ကျွန်တော်တို့သည်လည်း ပျော်ရွှင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ စပျစ်ချိုလည်း မစားချင်ဘူး၊ ပန်းသီးဖီလင်လည်း မခံစားချင်သေးဘူး၊ ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ရဲ့ အရသာကိုသာ စွဲမက်နေပြီ။
နောက်ပြန်လှုပ်ရှားပေးနေတဲ့ သူ့တင်ပါးရဲ့ပြုစုမှုရော တင်းကျပ်တဲ့ ညှစ်အားကြောင့် ကျွန်တော့်ဆောင့်ချက်တွေဟာ အထိန်းအကွပ်မဲ ပြင်းထန်စွာ။ ရေချိုးခန်းနံရံက မှန်ချပ်တွေကြောင့် မြင်နေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်တွေက လည်း ဖီလင်ကို ပိုမြှင့်ပေးနေတာများ မိုင်ကုန်။ နည်းနည်းလေးဟနေတဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုကြည့်ရင်း....ကြည့်ရင်း ငပဲကို အဆုံးထိဖိကပ်လိုက်ကာ ရွှေရည်တွေကို သူ့တင်ပါးဆုံထဲဖြည့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။
ချစ်သူရဲ့အနမ်း၊ အဖက်အတွယ်ဟာ ချိုမြပေစွ။ နှစ်ဦးသားဖက်တွယ်ကြရင်း နှုတ်ခမ်းအစုံဟာ ပူနွေးကြရပေါ့လေ။
လျှပ်တစ်ပြက်ကြည့်မိတဲ့ နံရံပေါ်ကနာရီကြောင့် ရင်ထဲဒိတ်ကနဲဖြစ်သွားရတယ်။ သူ့မိဘတွေဒီကိုရောက်တုန်း သူ့ သားရော ကျွန်တော့်ကိုပါတွေ့ဆုံချင်တဲ့အကြောင်း ပြောဆိုအသိပေးထားတာလေ။ အခု နာရီဝက်လောက်ပဲလို တော့တယ် ချိန်းထားတဲ့ အချိန်က။
တဘက်ရှည်ကိုလှမ်းယူလိုက်ကာ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးရော ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာပါ ခြောက်သွေ့အောင်သုတ်လိုက်ရင်း ရေချိုးခန်းထဲက အသာဆွဲထုတ်ခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော့်တင်ပါးတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကို ကြည့်ချင် ခံစားချင်သေးတယ်လို့ သူ ကလုပ်နေသေးတာ။
ဘီရိုထဲက အ၀တ်တွေထုတ်ရင်း အတွင်းခံဘောင်းဘီဝတ်နေစဉ်မှာ သူက sonic razor ကို ကိုင်ရင်း ကျွန်တော့် နားကပ်လာတယ်။
'မင်းပဲပြောတယ်လေ ငါနှုတ်ခမ်းမွှေးရိတ်ရမယ်ဆို၊ မင်းရိတ်ပေးလေ'
'ရဘူး ငါအရင် မင်းကိုရိတ်ပေးမယ်'
မေးရိုးတလျှောက် နှုတ်ခမ်းအပေါ်နားတွေဆီ ရွေ့လျားနေတဲ့ သူ့လက်တွေကိုအသာငြိမ်ပြီး အလိုက်သင့်နေပေးဖြစ်ရ ပါတယ်။ အတော်ရစ်တဲ့ ချစ်သူ။ အားလုံးသန့်စင်ချောမွေ့သွားတော့ After shave အရည်လေးအသာပွတ်ရင်း သူ့ကို ပြန်ပြီးရိတ်ပေးရတာပေါ့။ အမွှေးအမျှင်သိပ်မရှိကြပေမဲ့ မျက်နှာမှာ ဘာအမွှေးမှ ရှိမနေတာက ကျွန်တော့်အကြိုက်လေ။
ပန်းသွေးရောင် သူ့မေးဖျားက စိမ်းမြမြအရောင်ဖြစ်ပေါ်လာစဉ်မှာသူက နက်ဖြန်အတွက် အစီအစဉ်ကိုမေးတယ်။ 'ချစ်သူများနေ့'အတွက်လေ။
'ငါပြောပြီးပါပြီကွာ မန်နေဂျာကိုတောင် ငါတို့အကြိုက်သီချင်းလေးတွေ၊ ဗီဒီယိုကားတွေအကြောင်း ပြောပြီးပြီ။'
ကျောင်းလာတတ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေ၊ချစ်သူစုံတွဲတွေ အနားယူအပန်းဖြေတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ 'hot tub' အခန်း ရှိရာဆီသွားကြဖို့ confirm လုပ်ပြီးမပြီးမေးနေတာပါ။ video screen ကျယ်ကျယ်မှာ ကြည်နူးစရာအချစ်ဇာတ်ကား လေးတွေကြည့်ရင်း အမြှုပ်တဖွားဖွားထနေတဲ့ ရေချိုးကန်တွေထဲ အတူစိမ်နေကြတဲ့ချစ်သူတွေ၊ ကြည်နူးဖွယ်သီချင်း လေးတွေနားထောင်ရင်း ရေပူလေးတွေနဲ့စိမ်နေကြတဲ့ အတွဲတွေကို မြင်ရနိုင်တဲ့ နေရာလေးတစ်ခုပေါ့။
သူ့ Adams apple ကို တစ်ချက်နမ်းရှိုက်ရင်း ကိုလက်စသပ်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ အ၀တ်ကို သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်ဝတ်ဖို့ သတိပေးရသေး။ သူဝတ်နေကျ ဖရိုဖရဲ emo fashion မ၀တ်ဖို့တာတော့ တီရှပ်အဖြူနဲ့ စတိုင်လ်ဘောင်းဘီကို ၀တ်တယ်လေ။
'Dom Perignon, 1996. Only the best'
သူက ကျွန်တော့်အကြိုက်ကိုသိနေတော့ မှန်အောင်ပြောနိုင်တာပေါ့။ အ၀တ်တွေလဲလှယ်ပြီးတာတောင် အီးလေးဆွဲ ချင်သေးတာ သူ့မျက်စိရှေ့ နာရီကိုထိုးပြရင်း ဘတ်စ်ဂိတ်ကိုဆွဲခေါ်ခဲ့ရတယ်။
'စတော်ဘယ်ရီအစစ်ကို ချောကလက်အစစ်နဲ့လွှမ်းထားတာကို မာမီတို့ထည့်ပေးလိုက်လိမ့်မယ်'
'မင်းမှတ်မိတယ်နော် ပထမဆုံးတစ်ခုကို မင်းပါးစပ်နဲ့ခွံ့ကျွေးဖို့'
'ငါတို့က ကလေးလား မင်းနော် ဘာကိုလက်တွေ့လုပ်ချင်နေပြန်ပြီလဲ?'
'Yow, Harlequin Romance Novel တစ်အုပ်ထဲက ဟာမျိုးလေ'
အချိန်မှန်တိကျတဲ့ ဘတ်စ်တွေကြောင့် အချိန်သိပ်နောက်မကျပါဘူး။ သူ့မေမေတို့က အကြောင်းသိတွေဆိုတော့ တော်သေးတာလေ။ တည်းခိုကြတဲ့ ဟိုတယ်ကိုရောက်အသွားမှာတော့ Lobby ထဲမှာ ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကို ဆိုက်ကြည့်နေတဲ့ သော်ဇင့်မိဘတွေကိုတွေ့ရတယ်။ နှစ်ဝက်လောက်ကြာပြီ မတွေ့ရတာဆိုတော့ သော်ဇင်ကလည်း ချွဲလို့ကောင်းပေါ့။ မာမီတို့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ မာမီ့လက်ရာမုန့်တွေရယ်၊ ပိုက်ဆံရယ်၊သိုးမွှေးတစ်ထည်ကိုပေးတယ် ကျွန်တော့်အတွက်။ သူ့သားနှင့်အဆင်ပြေပြေနေနိုင်လို့သဘောကျသတဲ့၊ သူတို့သားလေးကို ဂရုစိုက်ပေးတာလည်း ကျေးဇူးတင်ပါသတဲ့၊ လိုအပ်တာရှိရင်ပြောဖို့ လိမ္မာပြီး စာကြိုးစားကြဖို့ ဆိုတာတွေလည်းပါတာပေါ့။
တစ်မြို့လုံးအနှံ့လိုက်ပို့ကြပြီး ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြတာ သော်ဇင်အတော့်ကိုပျော်နေတာ ကလေးနှင့်ပင်တူသေးတော့။ မာမီတို့အတွက် လက်ဆောင်နှင့်အတူ စာရှည်ရှည်တစ်ဆောင်ကိုလည်း ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
တိုက်ခန်းကိုပြန်လာတဲ့ အပြန်ခရီးမှာတော့ မျက်ရည်နည်းနည်းဝေ့ချင်နေတဲ့ သော်ဇင့်ကို ရယ်မော်စရာလေးတွေပြော ရင်း ကျွန်တော့်လက်ထဲက အထုပ်ကိုပြလိုက်တော့ မုန့်တွေထည့်ထားတဲ့ဘူးကိုဖွင့်ရင်း ကျွန်တော့်မျက်နှာကို ဆိုက် ကြည့်ကာ အဓိပ္ပာယ်ပါပါ မျက်စိမှိတ်ပြလေတယ်။
'အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေ' ဆိုတဲ့ဆုတောင်း ကျွန်တော်ပြည့်ချင်ပါရဲ့။ ချစ်သူနဲ့တစ်သက်တာ နှစ်လိုတက်မက် စွာဖြတ်သန်းရနိုင်မယ် မဟုတ်လား။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခု....... Life was going to be good.
Alex Aung (30.3.2010)